Ihe Nhazi SEO
Anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu na-arụ ọrụ iji meziwanye ọhụhụ ọchụchọ ha ugbu a ma ọ na-eju anyị anya na etu ihe njikarịcha njinigwe ha gara aga dị efu ha, na-enwetaghị ha. Ha na-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ nkịtị na-emebi njikarịcha ha.
Otu ụlọ ọrụ wuru ugbo nke ngalaba wee wepụta peeji dị mkpirikpi na mkpokọta isiokwu ọ bụla dịnụ, ma jikọọ saịtị niile. Ihe si na ya pụta bụ ọgba aghara nke ngalaba, mgbagwoju anya, na nsonaazụ ọchụchọ engine dị egwu. Anyị kwagara ma bugharia ngalaba niile n'ime otu, wee wuo peeji ndị na-enye ihe ọmụma maka isiokwu ọ bụla… n'ime ụbọchị 90 anyị anaghị eto oke karịa ebe ha nọ.
Ọ bụrụ na gị SEO ọkachamara si njikarịcha mejupụtara ọrụ ọ bụla na-abụghị nke na-adọta ma na-emezi ahụmịhe nke onye ọbịa, ma eleghị anya ị na-etinye onwe gị na nsogbu. Douglas Karr, DK New Media
Ihe omuma ihe omuma a site na Dot Com Infoway na aru oru oma nke ikewaputa na ikwalite oru ikwesiri ime ma oburu n’inwe olile anya:
Nzaghachi ekwenti - dịka ndị ọrụ nyocha ngwa ngwa na-eji ekwentị, na-achọpụta na ị na-achọpụta maka onye ọrụ mkpanaka ahụ dị oke egwu, gụnyere ibelata ọsọ ọsọ nke ibe gị na iji Google AMP.
Nsonaazụ Obodo - anyị na-ekere òkè ruo ọtụtụ afọ na visibiliti mpaghara na-enyere ọhụhụ mba aka mana ọ ka dịkwa ịtụnanya na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eleghara nnukwu ohere a anya. Gbaa mbọ hụ na edepụtara ụlọ ọrụ gị nke ọma Google maka Azụmaahịa ma jiri amaokwu (NAP - Aha, Adreesị, Nọmba ekwentị) na ibe obula nke saiti gi.
Ọdịnaya Ogo na Njikọ Ya - nke a bụ ebe nnukwu ndị ndụmọdụ na-eme nke ọma ma ndị jọgburu onwe ha na-etinye gị na nsogbu. Ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịmepụta nnukwu ọdịnaya (dị ka infographics) ma tinye ha na saịtị dị mkpa na-egosipụta ha (dị ka anyị na-eme maka DCI). Ihe omuma ihe a bara uru nye ndi na-ege anyi nti ya mere o bu ihe ezi uche di n’inye ha otuto site na ijiko ha na saiti ha. Otú ọ dị, ịtụkwasị ad-hoc backlinks na adịghị mkpa, ogbenye mma ngalaba agaghị enweta gị ebe ọ bụla.
Atụmatụ Nkwado - imepụta otutu ụdị ọdịnaya (ọdịyo, vidiyo, infographics, micrographics, socialgraphics), iti aka na mpi gị, ịjụ njikọ ndị achọghị, ịkwalite akara aha, inye azịza na ntanetị, iwepụta mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe, ịkwado maka nyocha olu na idobe saịtị gị na njikere. atụmatụ niile dị ukwuu iji kwalite ọdịnaya gị.
Nke a bụ infographic, Ihe Ntuziaka Google SEO na Atụmatụ Nkwado maka 2017:
Tags: audionjikọ azụDciDK New Mediantụpọ inf infayaynchịkọta googlegoogle azụmahịa mgoogle ogo ihegoogle + maka azụmahịanchọta mpagharanhazi mpagharavisibiliti mpagharaInfographics AhịaVidio Ahịamicrographicsnọmba ekwentịỤraogo iheAusoro nkwadoseo ogo iheelekọta mmadụ
Aug 12, 2011 na 9: 56 AM
Na SEO n'usoro na okporo ụzọ ihe ndị ọzọ. Mmadu niile na-anwa inweta onodu di elu na otutu uzo. Iji nwetakwu ọdịnaya okporo ụzọ, isiokwu, ọsọ ọsọ na peeji nke niile. Nke a bụ ezigbo infographic iji nyochaa saịtị nke ya na usoro dị iche iche.
seo njikọ ụlọ ọrụ
Dec 10, 2011 na 2:29 PM
hehehe…. n'ezie oké graphic, na-akpali mmasị n'ezie, ya doro nnọọ anya…
N'ịbụ onye nke mbụ ya abụghị ọrụ dị mfe, ị ga-abụrịrị ihe okike ma ị ga-adị njikere ịrụ ọrụ siri ike.
Apr 6, 2017 na 12: 32 AM
Hụ ihe omuma ahụ n'anya! Daalụ maka edemede a dị egwu Douglas! Anọ m na-eche, ị chere na Ọbịa ikenye dị ka njikọ ụlọ atụmatụ ga-adị irè afọ a?
Apr 6, 2017 na 12: 35 AM
Ee… ma dị ka onye mbipụta akwụkwọ m na-ada mba ike ịnyịnya ibu isiokwu ebe folks na-dị nnọọ na-agbalị ịkwanye njikọ m na saịtị. Enweghị m nsogbu na njikọ mgbe ozi ahụ dị ịtụnanya ma baa uru nye ndị na-ege m ntị. Ihe ọ bụla ọzọ bụ naanị mkparị.
Apr 6, 2017 na 8: 52 AM
Ekwesịrị m ikwenye gị 🙂 mana enwere ndị ọzọ. Ọ bụrụ na edere ederede ahụ nke ọma ma nye uru, njikọ ga-emerụ ahụ.
Apr 18, 2017 na 11: 04 AM
Njikọ adịghị mma nọ na ya n’ezie nwere ike ọ na-afụ ụfụ!